» “सीधाकुरा जनतासंग” कार्यक्रम का,प्रस्तोता रबि लामिछाने,द्वारा न्युज २४ छोडेको औपचारिक घोषणा” आखिर किन छाडेका हुन त ? यस्तो छ कारण ! हेर्नुहोस “सीधाकुरा जनतासंग” कार्यक्रम का,प्रस्तोता रबि लामिछाने,द्वारा न्युज २४ छोडेको औपचारिक घोषणा” आखिर किन छाडेका हुन त ? यस्तो छ कारण ! हेर्नुहोस – हाम्रो खबर
“सीधाकुरा जनतासंग” कार्यक्रम का,प्रस्तोता रबि लामिछाने,द्वारा न्युज २४ छोडेको औपचारिक घोषणा” आखिर किन छाडेका हुन त ? यस्तो छ कारण ! हेर्नुहोस
काठमाडौं, । बहुचर्चित कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संगका प्रस्तोता रबि लामिछानेले न्युज २४ छोडेको अनौपचारिक घोषणा गरेका छन् ।
“साथै सिधा कुरा” बन्द भएपछि लाखौं श्रोताहरु लाई अब आउने कार्यक्रम का बारेमा खुल्दुली लाग्नु सोभाविक हो। वहाँले बताए अनुसार अब आउने कार्यक्रम झन बलियो र दरिलो र ससक्त हुने जानकारी दिनु भएको छ।यद्यपि नया कार्यक्रम बारे केही खुलाउनु भएको छैन।